KEYDMEDIA - First Modern Somali News & Video Website - Warar - Dagaal ka dhacay Deegaanka Aw-Diinle & Meleeshiyo ka tirsan Kooxda Shabaab oo la qabqabtay
Wednesday 5 December 2012 07:35
Dagaal ka dhacay Deegaanka Aw-Diinle & Meleeshiyo ka tirsan Kooxda Shabaab oo la qabqabtay
Baydhabo (KON) - Dagaal Culus ayaa Xalay dhexmaray Ciidamada Dowlada iyo kuwa Maleeshiyaadka Kooxda Shabaab agagaarka Deegaanka Aw-Diinke ee Gobolka Baay.
Iska Horimaadkaan ayaa dhacay kadib markii Kolonyo uu la socday gudoomiyaha gobolka Baay C/fataax Ibraahim Geeseey ey soo weerareen Meleeshiyaadka Kooxda Shabaab.
Gudoomiyaha oo la hadlay Wabaahinta ayaa sheegay in Dagaalkaas eysan Waxba kasoo gaarin Asiga iyo Ciidamda Dowlada. Sidoo kale Geeseey ayaa sheegay in ey ka adkaadeen Meleeshiyaadkaas.
"Waxaan Qabanay ilaa iyo siddeed ka tirsan Kooxda Shabaab, waana soo bandhigi doonaa dhawaan" ayuu yiri Gudoomiyaha.
Goobjoogayaal la hadleen Warbaahinta KEYDMEDIA ONLINE ayaa sheegay in 2 ka tirsan Saraakiisha Ciidamda Dowlada lagu dhaawacay Dagaalkaasi.
Ma jiraan Warar xaqiijinaya khasaaraha ka dhashay dagaalkan.